News 18 Nepal || राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको ‘म्याच फी’ तोकियो, अब कति पाउँछन् ?
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको ‘म्याच फी’ तोकियो, अब कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकट संघ (क्यान) ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले एक दिवसीय खेल बापत पाउने रकम तोकेको छ । खेलाडीले एक दिवसीय खेल खेले वापत पुरुष खेलाडीले प्रति खेल १० हजार र महिला खेलाडीले ५ हजार रुपैयाँ ‘म्याच फी’ पाउने भएका छन् । क्यानले मगंलबार आर्थिक कार्यविधि र नियमावली २०७७ पारित गर्दै सो निर्णय गरेको हो ।
क्यानले कोषाध्यक्ष रोशनसिंह, सदस्य दुर्गाराज पाठक र माधव कर्माचार्य रहेको आर्थिक समितिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित नियमावली पारित गरेको हो । नयाँ आर्थिक नियमावली अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई खेलको म्याच फी वापत पुरुष टोलीका खेलाडीले १० हजार र महिला खेलाडीले ५ हजार पाउनेछन् ।
टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पुरुष खेलाडीले ५ हजार तथा महिला खेलाडीले ३ हजार महिला पुरुष दुवै खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणमा रहँदा दैनिक पाँच सय भत्ता पाउने छन् । यस्तै गत वर्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई र टि-२० आईको म्याच फि वापतको ५ हजार रुपैयाँ पनि खेलाडीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
एक दिवसीय घरेलु प्रतियोगितामा पुरुष खेलाडीले दैनिक भत्ता २ हजार ५ सय र महिला खेलाडीले २ हजार प्राप्त गर्ने छन् । टि-२० घरेलु प्रतियोगितामा पुरुष टोलीले दैनिक भत्ता २ हजार र महिला खेलाडीले १ हजार पाँच सय प्राप्त गर्ने छन् । क्लोज क्याम्पको म्याच फी पाँच सय रुपैयाँ दिइनेछ भने उमेर समूहको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा म्याच फि एक हजार रुपैयाँ दिइनेछ । यो म्याच फी खाना, बस्न र यातायात बाहेक हुनेछ ।